Tehina manify: Jereo ny karazany lehibe sy ny tombotsoan'ny tsirairay amin'izy ireo!
Aogositra 19, 2018 26 Novambra 2021
Ny teas dia tena zava-dehibe ho an'ireo izay mitady ho very kilao vitsivitsy. Izany dia satria izy ireo dia mampifangaro ny zava-misy ho salama amin'ny mety hampihena ny lanjany be loatra. Mazava ho azy fa tsy dite fotsiny izany fa misy ny karazany manokana dite mampihena.
Amin'ireto lohahevitra manaraka ireto dia hianaranao ny karazan-dite mampihena izay azonao sy tokony raisinao isan'andro hahatratrarana ny tanjonao. Jereo ihany koa ireo tombony sy fampahalalana misimisy momba ireo zava-pisotro manan-danja ireo!
dite mampihena voajanahary
Ny dite mampihena raha te hatao tsara dia tokony ho voajanahary. Tena voajanahary izany, tsy misy zezika, tsy misy bibikely, tsy misy akora simika. Sarotra ny mahita azy, saingy, azo antoka, misy tsenambarotra na tsena ao an-tanànanao mivarotra vokatra biolojika sy agro-ekolojika.
Zahao ireo karazana sy fomba fahandro lehibe amin'ny dite voajanahary izay hanampy anao hamoy kilao vitsivitsy!
Mba hanaovana dite blackberry dia mila mividy ravina voankazo maina ianao. Avy eo, ampio iray sotrokely amin'ireo ravina ireo, miaraka amin'ny dite maitso iray hafa ary atsofohy anaty rano mangotraka iray kaopy. Avelao izy hijoro mandritra ny folo minitra raha efa miala ny hafanana, sakano ary hosotroina.
Mba hanampiana azy amin'ny fihenan'ny lanja, ny tena mety dia ny misotro kaopy iray andro alohan'ny sakafo rehetra.
Mananasy mahafinaritra iray hafa koa ny mananasy izay hanampy anao hihena. Mila ny hoditry ny voankazo ianao, rano iray litatra, ravina milina enina ary zava-mamy araka ny itiavanao azy.
Mba hiomanana, andrahoina anaty rano mandritra ny folo minitra eo ho eo fotsiny ny hoditra, ampio ny mint miaraka amina hafanana, avelao izy hiala sasatra mandritra ny dimy minitra, afangaro amin'ny zava-mamy ilay zava-manitra rehetra, araho ary sotroina intelo na inefatra isan'andro.
Vakio bebe kokoa ny atiny ao amin'ny lahatsoratra momba ny Tamarind Leaf Tea!
Dite mampihena ny sakamalao
Ny sakamalao koa dia safidy mahavariana dite mampihena. Tsotra be ny manao azy, manapaka fotsiny ny sakamalao vaovao 2 sentimetatra, apetraho anaty rano dia andrahoina mandritra ny 10 minitra. Avy eo ketraho fotsiny, hivaingana ary hisotro. Tokony horaisinao in-3 isan'andro.
Ny dite maintso no be mpitia indrindra eto an-dafy rehetra. Tsy mahagaga ihany koa, tena tsotra ny vita ary mitondra valiny tena tsara.
Mba hanomanana ny anao dia mila mampangotraka ny rano ianao. Raha vantany vao mitranga izany dia vonoy ny hafanana ary ampio dite maitso iray sotro. Sarony ny vilany, avelao eo mandritra ny folo minitra izy, sakano, apetraka mangatsiaka dia sotroinao intelo na inefatra isan'andro.
Ny Hibiscus dia miasa mitovy amin'ny dite maitso. Mangotraka aloha ny rano, avy eo mamono ny hafanana, mametraka ravina hibiscus iray sotro iray sotro, fofona, mangatsiaka ary misotro alohan'ny sakafo.
Vakio ihany koa: Ny tombony rehetra azo avy amin'ny Matchá!
Raha ny kanelina dia mila manisy tsorakazo efatra miaraka amin'ny rano ianao mba hahandro mandritra ny folo minitra. Avy eo totozy fotsiny ary sotroy intelo isan'andro ny dite, alohan'ny sakafo lehibe.
Eny, misy dite persily mampihena ary tena tsotra ny manamboatra azy, toy ny hafa rehetra ihany. Mila mahandro persily dimy kesika miaraka amin'ny rano mandritra ny 5 minitra ianao. Avy eo esory fotsiny ny ravina dia misotroa dite mafana na mangatsiaka.
Dite mampihena anana 7
Tea dite 7 no be pitsiny indrindra amin'ireo. Izany dia satria tsy maintsy manampy soavaly soavaly ianao, coot, chamomile, ahitra penny, fucus, plantain ary espinheira-santa. Azonao atao ny mahita azy rehetra miaraka na misaraka amin'ny fivarotana ravina, faka ary dite.
Ho fanomanana dia mila mitondra rano iray litatra ianao mangotraka. Rehefa manomboka miboiboika dia vonoy ny hafanana ary ampio ny anana rehetra. Avelao mandritra ny folo minitra, sotroina, mangatsiatsiaka ary ho vonona hisotro ny dite manify.
Tombontsoa azo avy amin'ny dite mampihena
Ny ankabeazan'ireo dite ireo dia antioksida, izany hoe, ankoatry ny fihenan'ny lanjany, manala ireo poizina misy ao amin'ny atiny izy ireo ary manova tanteraka ny fiainan'ny olona izany.
Ny aty miasa tanteraka dia manome anao tanjaka, fahavelomana, fahasalamana, fifaliana, fahasambarana, vatana salama, miendrika endrika, fohifohy ny fomba tadiavinao hatrizay.
Ho fanampin'ity hery hanampiana ny aty amin'ny famongorana poizina ity, ireto dite ireto dia manafoana ny tavy, ny kolesterola, ny gliosidra diso tafahoatra ary ireo singa hafa izay mamela anao manana kilao fanampiny fanampiny.
Herbalife dite manify
Herbalife dia marika dite sy shakes izay mampiasa anana vitsivitsy hampiroborobo ny fihenan-danja. Ny zavatra tsara indrindra dia ny fanaovana dite mihena voajanahary miaraka amin'ny sakafo sy fanatanjahan-tena. Mahasalama kokoa, mora vidy kokoa ary mitondra valiny mahomby.
Na izany aza, raha tsy manam-potoana na hakamoana ny hakamoana ianao, ny fanaovana tsingerina Herbalife dia mety ho safidy tsara mandritra ny fotoana fohy ilainao mila mampihena ny lanjanao haingana. Fa tsy misy na inona na inona momba ny fanovana azy ho fomba fiaina.
Tsotra be daholo ny fomba fanamboarana dite mampihena. Mitovy amin'ny mangotraka ny rano izy io, manampy ny ahitra, manasitrana ary misotro. Tsy miafina mihitsy.
Tena mandeha ve io karazana dite io?
Tsy misy dite mampihena miasa fahagagana. Mila manaraka sakafo ianao, manao fanatanjahan-tena, manana fahazarana mahasalama amin'ny ankapobeny ary ireo dite ireo dia hanampy amin'ny fanafoanana ny tavy sy poizina ary hampihena anao.
Raha tianao ity lahatsoratra ity momba ny dite manify, zarao amin'ny tambajotra sosialinao!
Tags:sakafoteasmampihena lanjamanavesatrakalitaon'ny fiainana